नाइजेरियाका लागि भिसा आवेदन प्रक्रिया - ALinks
नाइजेरियाका लागि भिसा प्रक्रिया धेरै नै सरलीकृत छ। नाइजेरिया भिसा आवेदन प्रक्रिया अब अनलाइन गरिएको छ। भिसाका लागि आवेदन दिनु अघि तपाईंले जान्नुपर्ने केहि चीजहरू छन्, किनकि त्यहाँ केही देशहरू छन् जसका नागरिकले अनुमतिविना नाइजेरिया भ्रमण गर्न सक्छन्। त्यसोभए, यदि तपाईंलाई पहुँच आवश्यक छ भने तपाईंले भिसाका लागि आवेदन दिनका लागि केहि चरणहरू अनुसरण गर्नुपर्छ। सबै भन्दा महत्वपूर्ण अनुप्रयोगको फारम भर्नु हो सही तरिकाले। नाइजेरियन पासपोर्टको लागि प्रमुख वर्गीकरणहरू निम्नानुसार छन्:
अस्थायी काम भिसा
के मलाई नाइजेरिया प्रवेश गर्न भिसा चाहिन्छ?
नाइजेरिया प्रविष्ट गर्न, तपाईसँग पासपोर्ट वैध छ महिनाको लागि मान्य हुनुपर्छ। र पोलियो र पहेंलो ज्वरोका लागि खोपहरूको प्रमाण। केवल यात्रा अघि आधिकारिक पूर्वतयारीहरू द्वारा तपाईं एयरपोर्टमा "आगमन आगमन" भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। भिसा र एन्ट्रीहरूमा भर्खरको जानकारीको लागि नाइजेरियाको दूतावासको वेबसाइट हेर्नुहोस्।
भूतपूर्व नाइजेरियाली नागरिकहरू मान्य वैदेशिक राहदानीसहित नाइजेरियाको राहदानी पनि भिसा लिन योग्य छैनन्.
केन्याका नागरिकहरूले एकका लागि भिसा लिन सक्छन् अधिकतम आगमनमा days ० दिनसम्म रहनुहोस्।
ब्राजिल, चीन, नामिबिया र दक्षिण अफ्रिकाका नागरिकहरूलाई जारी गरिएको कूटनीतिक वा सेवा समूह पासपोर्ट धारकहरूलाई नाइजेरियाको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन र टर्की नागरिकलाई कूटनीतिक पासपोर्ट धारकहरू जारी गरियो।.
चिनियाँ नागरिकलाई सार्वजनिक मामिलाको राहदानी राख्नेलाई भिसा आवश्यक पर्दैन अधिकतम 30० दिनसम्म रहनुहोस्।
नियमित प्रवेश आवश्यकताहरू
तपाईको राहदानी कम्तिमा छ महिनाको लागि मान्य हुनुपर्छ तपाईले नाइजेरिया पुग्नुभएको मितिबाट।
आपतकालीन यात्रामा बेलायत रिपोर्टहरू।
युके ईटीडी अनुमति छ प्रवेश र नाइजेरियाबाट बाहिर निस्कनको लागि, आवश्यक भिसा जारी गरेको छ भने।
पहेलो ज्वरो प्रमाणपत्रको लागि आवाश्यक हुन्छ
यदि तपाईंलाई पहेलो ज्वरो सर्टिफिकेट चाहियो भने जाँच गर्नुहोस् TravelHealthPro वेबसाइट।
कागजातहरू भिसा आवेदनका लागि आवाश्यक हुन्छ
वैध पासपोर्ट अनिवार्य छ, कम्तिमा छ महिनाको वैधताको साथ।
भरिएको भिसा आवेदन फाराम।
पुष्टिकरणका लागि अनलाइन भुक्तानी रसिद।
भर्खरैको राहदानी आकारको फोटो (२ प्रतिलिपिहरू)।
वैध फिर्ती एयरलाइन टिकट।
नाइजेरियामा बस्नका लागि पर्याप्त रकमको प्रमाण (जस्तै बैंक स्टेटमेन्ट, आदि)।
होस्ट कम्पनीबाट आमन्त्रित पत्र। यसले नाइजेरियामै बसोबास गर्दा तपाईंको पूर्ण अध्यागमन र वित्तीय स्थिति बताउँदछ।
आवेदकको कम्पनी वा संगठनबाट परिचय पत्र।
अस्थायी कार्य अनुमति भिसा
आवेदकको कम्पनी वा नाइजेरियाको संस्थाबाट परिचय पत्र।
वैध उडान टिकट (यदि लागू भएमा)।
नियमित (STR) भिसाको विषय
वैध राहदानी कम्तिमा छ महिनाको मान्यताको साथ अनिवार्य छ।
रोजगार प्रस्ताव पत्र (cop प्रतिलिपिहरू)
रोजगार पत्र स्वीकृति प्रतिलिपि (cop प्रतिलिपि)
पुनःसुरु, डिग्री, र सबै आवश्यक प्रमाणपत्रहरू (मूलसँग ies प्रतिलिपिहरू)
Res पुन: सुरू, डिग्रीहरू, र प्रमाणपत्र कमाइयो
औपचारिक पत्र नाइजेरियाको कम्पनीबाट एसटीआर भिसाका लागि अनुरोध गर्दै थियो (documents कागजात)।
माथिको सूचीबद्ध कागजातहरू प्रत्येक कागजातको cop प्रतिलिपिहरूको सेटमा व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
आवश्यक कागजातहरूमा थप विस्तृत जानकारीको लागि यसमा सन्दर्भ गर्नुहोस् पृष्ठ।
१ D को उमेर मुनिको व्यक्तिगत कागजात
अनुप्रयोग हुनु पर्छ सँगै हुन अभिभावकको पासपोर्टको फोटोकपी (बायोडेटा पृष्ठ)। वा वैध आईडीका साथै इनोभेट १ सेवामा भुक्तानीको प्रमाण।
शिशुका लागि जन्म प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
दुवै अभिभावकहरू सँगसँगै पढेको अनुमोदनको चिठ्ठी
नाइजेरियाको लागि भिसा कति छ?
Single १US० यूएसडी को भिसा शुल्क र single US० यूएसडी को एक प्रसंस्करण शुल्क प्रत्येक एकल प्रवेश भिसाको लागि भुक्तानयोग्य छ बहु प्रवेश भिसा। सबै भुक्तानी द्वारा संकलित छन् एक मनी अर्डर को तरीका नाइजेरियाली दूतावास लाई भुक्तान गरियो।
नाइजेरियाको भिसा लिन कति समय लाग्छ?
नाइजेरिया भिसा आवेदन प्रक्रिया स्वीकृत हुन सामान्यतया -3--5 कार्य दिन लाग्छ। यद्यपि यो भिसा आवेदन प्रकारमा निर्भर गर्दछ जुन तपाईले आवेदन गर्नु भएको छ।
अनलाइन नाइजेरिया भिसाको लागि कसरी आवेदन दिने?
यहाँ क्लिक गर्नुहोस् portal.immigration.gov.ng
अनलाइन फारमहरू भर्नुहोस्, अपलोड गर्नुहोस्, र प्रिन्ट गर्नुहोस्।
भुक्तानी सेक्सनमा अगाडि बढ्नुहोस्; मनी अर्डर विकल्पको साथ भुक्तानी छनौट गर्नुहोस्। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंसँग वास्तविक मनी अर्डर शुल्कहरू छ, जस्तो तपाईं गर्नुहुन्छ अपेक्षित हुनु मनी अर्डर जानकारी प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न.
अमेरिकी पासपोर्ट धारकहरूको लागि नयाँ भिसा शुल्क १$० डलर हो।
नयाँ भिसा शुल्कको लागि, कृपया जानुहोस् www.innovate1services.com। समर्थन स्तम्भमा जानुहोस्, र देश क्लिक गर्नुहोस्। कृपया ध्यान दिनुहोस् कि आवेदन सबमिट गरेपछि शुल्क लिइएको फिर्ती फिर्ता हुँदैन।
कसरी अनलाइन भिसा भर्नको लागि मार्गनिर्देशन
Https: /portal.immigration.gov.ng मा नाइजेरियामा आप्रवासको लागि वेबसाइटमा जानुहोस्।
भिसा / भिसा प्रवेशका लागि फ्रि जोन छनौट गर्नुहोस्।
कन्ट्री सर्टिंगमा क्लिक गर्नुहोस्, अमेरिका छान्नुहोस्।
सुरु अनुरोध मा क्लिक गर्नुहोस्
अनुप्रयोग Inovate1 Services को वेबसाइटमा देखा पर्दछ। कृपया तपाईंको हालको गुगल ईमेल वा याहू ईमेल खाताको साथ लगइन गर्नुहोस्। र आवेदन प्रक्रिया को लागी एक खाता बनाउनुहोस्।
लगइन पछि आवेदन प्रक्रिया सुरु गर्नुहोस्। इनोभेट १ सेवाहरूको साथ तपाईंको खाता दर्ता गर्नुहोस्
तपाईंको सेवा केन्द्रको रूपमा WASHINGTON DC छान्नुहोस्।
फारम भर्नुहोस् र SUBMIT बटन थिच्नुहोस्, त्यसपछि सम्पूर्ण कागजात प्रिन्ट गर्नुहोस् (सात पृष्ठ)
तपाईंले आवेदन गरे पछि तपाईंले एक आवेदन आईडी प्राप्त गर्नुहुनेछ।
कृपया अगाडि बढ्नुहोस् र भिसा फी भुक्तानी गर्नुहोस् तपाईंको डेबिट वा क्रेडिट कार्डको साथ आवेदन आईडी प्रयोग गरेर।
यदि तपाईंसँग डेबिट वा क्रेडिट कार्ड छैन भने, कृपया $ १ .० मनी अर्डर (भिसा शुल्क) किन्नुहोस्। मनी अर्डर अनुप्रयोग आईडी र सन्दर्भ संख्यामा जडान गर्नुहोस्
कृपया नोट गर्नुहोस्: यदि तपाइँ एक मनी अर्डरको साथ भुक्तानी गर्नुहुन्छ भने, तपाइँले इनोभेट १ सेवाहरूबाट पुष्टिकरण प्राप्त गर्नको लागि पर्खनु पर्नेछ जुन उनीहरूले तपाइँको मनी अर्डर प्राप्त गरेका छन्।
कृपया तपाइँको भिसा भुक्तानी पर्ची र भिसा रसीद फारम प्रिन्ट गर्नुहोस्।
औपचारिक, DIPLOMATIC, र अन्य आधिकारिक पासपोर्टहरू
कूटनीतिक / आधिकारिक पासपोर्ट धारकहरू आशा गरिन्छ अनलाइन आवेदन फाराम पूरा गर्न: portal.immigration.gov.ngwelcome एउटा आवेदन आईडी र सन्दर्भ नम्बर प्राप्त गर्न। पूरा भएको आवेदन फारम छापिएको र दुई पासपोर्ट आकारका फोटोहरू सहित सबमिट गरियो। दूतावासमा आधिकारिक पासपोर्ट र कुनै अन्य समर्थन कागजात (हरू) सहित.
भारतीयहरुको लागी युक्रेन भिसा
मलेसिया को लागी पर्यटक भिसा कसरी प्राप्त गर्ने?
अमेरिकाबाट टर्कीका लागि भिसा कसरी पाउने?